XOG: AC Milan oo heshiis hordhac ah la gaartey Giovanni Simeone (Goormuu imanayaa?) – Gool FM
XOG: AC Milan oo heshiis hordhac ah la gaartey Giovanni Simeone (Goormuu imanayaa?)
Raage January 31, 2017
(Milano) 31 Jan 2017 – Warar haatan soo baxaya ayaa sheegaya in AC Milan ay heshiis afka ah la gaartey qannaas-yaraha kooxda Genoa ee Giovanni Simeone kaasoo imanaya xagaaga.
Kooxda Grifone ayaa horraantii maanta qandaraaska laacibkan weerarka ah ee 21-jirka ah maanta ka wada iibsatey kooxda River Plate, iyadoo sida la sheegayo 20 milyan oo euro ka diideey kooxda Villareal.
Iminka ayuu Tuttomercatoweb wuxuu werinayaa in Rossoneri ay heshiis kula jirto Simeone – oo uu dhalay macallinka Atletico Madrid ee Diego – kaasoo kusoo biiraya xagaaga.
Arrintan ayaa waxaa dhamaystiraha dalladda Chinese-ka ah ee Sino-Europe Sports oo lagu wado inay bisha Maarso la wareegto Rossoneri, waxay kaloo muujinaysaa in la fasixi doono Carlos Bacca oo la qabsan la’ qaab-ciyaareedka Montella.
Simeone ayaa durba 11 gool fasal-ciyaareedkan u dhaliyay kooxdiisa Genoa tartamada oo idil, kuwaasoo ay ku jiraan 2 uu dhaliyay kulankii ay Axaddii dhowayd 3-3 kula galeen kooxda Fiorentina.
Cholito ayaa ka tarjumaya qorshaha cusub ee AC Milan oo ah inay soo urursato xiddigo yar yar oo hibo iyo mustaqbal ku leh kubadda cagta, si ay u rogto baal cusub oo guuleed.
XAN: Dybala oo diidi doona Manchester United...Halkee ayuu saanyaday?
GOOGOOSKA: Arsenal vs Watford 1-2 (Gunners oo gurigeeda lagu galay)